नेपाल आज | गगनलाई बास्कोटाको जवाफ– भृकटीमण्डप पनि ओलीवेशनमय नै हुने भएछ !
गगनलाई बास्कोटाको जवाफ– भृकटीमण्डप पनि ओलीवेशनमय नै हुने भएछ !
नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल वास्कोटाले भृकुटी मण्डपमा हुँदै गरेको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन पनि ओलीमय भएको वताएका छन् ।
चितवनको सौराहामा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनलाई ‘ओलीवेशन’ भन्दै टिप्पणी गर्नेहरुलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो वताएका हुन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफनो उम्मेदवारी ओली पदचाप छेक्नका लागि वताएको विषय उठाउँदै उनले कांग्रेस नेताहरुलाई ब्यंग्य गरेका छन् ।
विहिवार ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्–‘तीन दिन एता कांग्रेस नेताहरुको अन्तरवार्ता र भाषण खुब सुने। कांग्रेसमा पौडल र देउवा दुबै पक्षको उम्मेदवारी ओली पदचाप छेक्नका लागि रे! एमालेको दशौ महाधिवेशन चल्दै गर्दा चितवनमा ओलीवेशन चल्दै छ भन्ने साथीलाई झल्झली सम्झदै भन्न मन लाग्यो–आखिर, भृकुटीमण्डप पनि ओलीवेशनमय नै त हुने भएछ।’
सौराहामा एमाले महाधिवेशन चल्दै गर्दा कांग्रेस नेता गगन थापाले नेकपा एमालेको महाधिवेशनका नाममा चितवनको नारायणी किनारमा ‘ओलीवेशन’ गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘त्यहाँ सबै बा’का छोराछोरीहरू मात्रै छन् । त्यहाँ सबै बा ! बा ! मात्रै भन्छन्’ नेता थापाले भनेका थिए–‘आज नारायणी किनारमा अधिवेशन भइरहेको छैन, कसले ओली बा’को पाउमा तेल राम्रोसँग दल्न सक्दछ भन्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।’
उनले नेपाली कांग्रेसका जिल्ला अधिवेशनहरुमा भएका गैरराजनीतिक क्रियाकलापलाई पनि लोकतान्त्रीक पद्धती भन्दै एमालेले थाहै नपाई अधिवेशन सकेको भन्दै मजाक गरेका थिए । ‘हिजो मेरो टोलका अभिभावकहरूले सोध्नुभयो । एमालेले यत्रो ७७ जिल्लाको अधिवेशन सक्यो, थाहै भएन । आज नारायणी किनारमा कति ठूलो सभा भयो । अधिवेशन त यस्तो पो हुनुपर्छ । तिमीहरूको हे¥यो, उता भिडेको छ, यता बाझेको छ, जताततै लफडै–लफडा छ,’ थापाले आफूले जवाफमा काकाहरूलाई भनेको सुनाउँदै भने, ‘एमाले र हामीहरूबीचमा अलिकति फरक छ । हाम्रो अधिवेशन हो, त्यो ओलीवेशन हो । अधिवेशन र ओलीवेशनमा फरक छ । हाम्रो पार्टीको अधिवेशनमा कार्यकर्ताहरू सहभागी हुन्छन् । हरेक कार्यकर्ता आफैंमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन् । हरेक स्वतन्त्र व्यक्तिको आफ्नो मत छ, जहाँ मत हुन्छ, त्यहाँ मतभेद हुन्छ, त्यहाँ मतान्तर हुनसक्छ । तर, ओलीवेशनमा त्यहाँ कोही पनि स्वतन्त्र कार्यकर्ता छैन ।’
थापाले यसो भन्दै गर्दा कांग्रेसका जिल्ला अधिवेशनहरुमा गोली चलिरहेको अवस्था थियो। जिल्ला अधिवेशनमा भएका गैरराजनीतिक चरित्रतर्फ संकेत गर्दै उनले भने–‘कही कतै सीमाहरू नाघिएका छन् । तर, यो हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हो । हामीबीच मतभेद हुन्छ, मतान्तर हुन्छ । त्यही बीचबाट हामी कुशल नेतृत्व चयन गर्छौ। त्यसैले कांग्रेसमा यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । यो हाम्रो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।’
गोकुल वास्कोटा रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवा गगन थापा